Qarxyo maanta oo jimce ah ka dhacay magaaladda Muqdisho – Madal Furan
Hoy > Warka > Qarxyo maanta oo jimce ah ka dhacay magaaladda Muqdisho
Qarxyo maanta oo jimce ah ka dhacay magaaladda Muqdisho
Muqdisho (Madal Furan) – Wararka ka imaanya magaaladda Muqdisho ayaa sheegaya in maanta ay ka dhaceen Laba qarax oo isu dhow, kuwaasoo oo loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Qaraxa hore ayaa wuxuu ka dhacay goob bar kontorool ah oo ciidamada Nabad sugidu ay leeyihiin wadadda aada garoonka diyaaradaha ee magaaladda Muqdisho, qaraxan oo dhacay xiligii salaada Jimcaha ayaa la sheegay inuu ku dhintay ninkii gaariga qaraxay waday, kadib markii ay ciidamaddu fashiliyeen.
Qaraxa Labaad ayaa qiyaastii 2:30 wuxuu ka dhacay meel u dhow Isbitaalka Banaadir ee magaaladda Muqdisho oo ku yaal wadadda aada magaaladda Afgooye, waxaana goobta qaraxu ka dhacay bar kontorool ku lahaa ciidamadda Nabad Sugida.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamaddu ay istaajiyeen gaariga, dabadeedna uu ka soo degay wadihii gaariga uuna Bastoolad ku toogtay nin ka tirsanaa ciidamadda, kadibna isaga isla goobtaas lagu dilay, markaas wixii ka danbeeyeyna uu qarxay gaarigu.
si dhab ah looma sheegin khasaaraha halkaas ka dhacay, waxaase soo baxaya warar sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac gaaray dadka rayidka ah ee ka ag dhowaa halkaas.
Ciidamadda amaanka ayaa gaaray goobihii qaraxyadu ka dhaceen, balse ma jiro wax war ah oo weli ka soo baxay.
Gal-mudugta Cadaado oo soo dhoweysay go’aankii DFS ee habraaca Doorashooyinka Goboladda.
Saxaafadda oo loo diiday kulanka Xildhibaanada Baarlamaanka DFS oo xiisadi ka dhex taagan tahay